Ukufudumala komhlaba kuthinta izimbali zamathumbu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukushisa komhlaba jikelele kuthinta izimbali zamathumbu
Ngaphandle kwama-bacterium nama-virus, akukho silwane ebesizophila. Yize kuneziningi ezingadala izifo, eziningi zazo ezingabulala, iqiniso ukuthi kunezinye eziningi ezisiza umphathi ukuba abe nempilo enhle. Empeleni, ngisho nomuntu angaphila ngaphandle kwezinhlobo ezingama-2000 zamagciwane ahlala ngaphakathi kuwo.
Kodwa ukufudumala kwembulunga yonke kuthinta wonke umuntu, kufaka phakathi izimbali zamathumbu, ngokusho kocwaningo olushicilelwe ephephandabeni i-'Nature Ecology and Evolution '.
Izimbali zamathumbu noma i-microbiota yilezo ezakhiwe ngamagciwane ahlala emathunjini agcina ubudlelwane be-symbiotic, bobabili bobabili kanye nokuhlangana ngokubamba kwabo. Ngaphakathi kuye, ingakhula futhi yande endaweni efudumele cishe ngama-2 degrees Celsius kunangaphandle.
Nokho, kuyaziwa ukuthi kungashintshwa uchungechunge lwezinto ezingaphakathi (uketshezi lwamathumbu) futhi okungaphandle (njengokuguga, ingcindezi, imishanguzo umphathi ayiphuzayo, nohlobo lokudla olulandelwayo). Kepha manje kunesici esisha: ukushisa kakhulu komhlaba, okungathi ngokocwaningo kungayiqeda.
Ukufinyelela kulesi siphetho, abacwaningi benze ucwaningo nezibankwa esikhungweni esibizwa ngeMetatron, lapho bekwazile ukulawula izinga lokushisa nokubona ukuthi izilwane zisabela kanjani, kanye nezimbali zazo zamathumbu. Ngale ndlela, zikwazile ukuqinisekisa ukuthi indawo enamazinga okushisa 2 kuya ku-3ºC aphezulu kunamanje, okulindeleke ukuthi kube sekupheleni kwekhulu leminyaka, ukwehluka kokuphila kwamagciwane amancane kwehliswe ngama-34% ngonyaka owodwa nje.
Ngenxa yalokho, izibankwa zaziphila isikhathi esifushane kunezinye ezingafakwanga ingcindezi yesimo sezulu esilingisayo, okunika okuningi okufanele ucabange ngakho, ngoba ochwepheshe bathi lezi zinkinga zingatholakala kwezinye izinhlobo eziningi zezinto eziphilayo.
Ungasifunda isifundo lapha (ngesiNgisi).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukushisa komhlaba jikelele kuthinta izimbali zamathumbu
AmaTundras asebenza njengama-amplifiers wokushintsha kwesimo sezulu
Umhlaba ungadlula u-1,5 degrees ngokushisa ngo-2026